နည်းပညာတွေတိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့ ခေတ်အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ အားသာချက်ကို Service နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီအခြေအနေမှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့
After Sales Service Operation ရဲ့လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို History နှင့်တကွထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရဲ့လား ?
မိမိတို့ ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လိုကြိုးပမ်းနေကြလဲ၊Customer တွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရဲ့လား ?
မိမိတို့ Serviceက Customer စိတ်ကျေနပ်မှုရစေရဲ့လားသိနိုင်ဖို့ Feed back တွေ၊ Services Report တွေစနစ်တကျ ရှိနေရဲ့လား ?
မိမိတို့ရဲ့ Service Level မြှင့်တင်ရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုစနစ်တကျစီစစ်ပေးနိုင်မည့် အချက်အလက်တွေတစ်စုတစ်စည်းထဲ ရှိနေရဲ့လား ?
အစရှိသော မေးခွန်းလေးတွေနဲ့မိမိ Operation ကိုသုံးသပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Maintenance Service CRM လေးကိုလေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။
MS CRM System (Maintenance Service Customer Relationship Management System ) မှာ
စတဲ့ အဓိက အခန်း ကဏ္ဍ (၄) ခုရှိပါတယ်။
Customer တွေကို စတင်ရှာဖွေပြီး မိမိတို့ရဲ့ products နှင့် Services ကို မိတ်ဆက်ရမည့် Marketing Process များအား အထောက်အကူပေးမည့်
– Seminar , Event task and Schedule Control
– One Click နဲ့ မြောက်များစွာသော mail address တွေကို marketing mail ပို့နိုင်မည့် Email
– Potential customer information တွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် Lead
– Lead Customer တွေရဲ့ information enquiry တွေ record ယူနိုင်မည့် Webforms
Marketing process တွေနဲ့ Customer ကို စုဆောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ Probability မြင့်တဲ့ Customer တွေရဲ့နောက်ကို Sale Process တွေနဲ့လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ
– Customer information တွေ detail ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် Contact
– Sales process ရဲ့ target နဲ့ schedule ချမှတ်ပြီး မိမိတို့ ကြိုးစားခဲ့သမျှ process တွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည့် Opportunities control
– နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုများကို လွယ်ကူစွာ Report လုပ်နိုင်မည့် Daily Report
Customer တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူပြီး Customer loyalty တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး Service process တွေကို လုပ်ဆောင်သည့် အချိန်မှာ
– Customer ကိုယ်တိုင် MS CRM ရဲ့ Customer portal ကိုအသုံးပြုပြီး Maintenance enquiry များ ဖွင့်နိုင်ခြင်း
– မိမိတို့ ဖွင့်ထားသော Enquiry တွေကို ဘယ်လိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေလဲဆိုတာ Customer portal မှတဆင့် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
– Maintenance Engineer များမှလည်း Customer service လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းရဲ့အခြေအနေ၊ အချက်အလက်တွေကို Customer portal မှတဆင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့်အချိန်ကုန်သက်သာ၍ Data Privacy အတွက်ပူပန်မှုမရှိစေခြင်း
– Maintenance Process Controlအတွက်Ticket Functionဖြင့်အဆင့်ဆင့်Service Recordများထားနိုင်၍မိမိတို့Serviceပြီးဆုံးချိန်တွင်Service Reportပေးနိုင်ခြင်း
– Customer Sign လက်ခံရယူ၍ Service ပြီးစီးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်း
– Maintenance လုပ်ပေးခဲ့ရသမျှ History ကို Photo ဖြင့်သာမက video ဖြင့်ပါ Record ယူနိုင်ခြင်း
– မိမိတို့နှင့် Service Contract ချုပ်ဆိုထားသော Customer များရှိပါက Service Contract(function) ဖြင့် Contract Schedule များ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
– FAQ ထဲတွင်လည်း သိလိုသည့် အကြောင်းအရာ များအတွက် အမေးအဖြေကဏ္ဍများဖြင့် ဆွေးနွေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ Customer များ၏အမေးများသောမေးခွန်းများ၊ User error များမကြာခဏမဖြစ်ပေါ်စေရန်ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်အချက်များကို FAQ Function မှအထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
– Sales Admin Operation အတွက် အထောက်အကူပေးမည့် Quotation များ၊ Quotation မှတဆင့် Sales Order များ၊ Purchase Order နှင့် Invoice များ အထိ အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး System ထဲမှ အလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
– Invoice များရဲ့ Payment Data များအား သွင်းယူ၍ လိုအပ်သော Invoice Follow up များ လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
– Inventory control (function) ဖြင့် မိမိတို့၏ Stock အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ခြင်း
– Stock Balance များ စစ်ဆေး၍ Purchase Order များ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
– Supplier Information များကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သော Vendor Function ၊ Product / Service အမျိုးအစားအလိုက်အချက်အလက်များ၊ Purchasing price / Selling price / Sales commissions မျာ းသတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ခြင်း
– လိုအပ်သမျှ Report တွေကို System ထဲတွင် Input လုပ်ထားသော Data များမှအလွယ်တကူဖန်တီးယူလို့ ရနိုင်ခြင်း
– Excel /PDF များဖြင့် Download လုပ်နိုင်ခြင်း
– Schedule Alert များ၊ အရေးကြီးသော Process များရဲ့ Alert များကို setting များ ချထားနိုင်ခြင်း
– User Role ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့် user level များအလိုက်လုပ်ဆောင်ခွင့်များ၊ Data Create ၊ Data Edit မှစ၍ Control လုပ်ထားနိုင်ခြင်း
– Data များကို အလွယ်တကူမမြင်နိုင်အောင်၊ Download မလုပ်နိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းစတဲ့ Data privacy ပိုင်းအတွက်ပါစိတ်ချလုံခြုံမှုကိုရစေပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ MS CRM System ( Maintenance Service Customer Relationship Management System ) ရဲ့အဓိကအခန်း ကဏ္ဍလေးခုမှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်များကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ Maintenance Service CRM System အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ Company ၏ Service Operation ပိုင်းများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် Customer Enquiry များကို မှတ်သားထားသည့်အချက်အလက်များ၊ Operation အတွင်းလုပ်ကိုင်နေကြသောဝန်ထမ်းများ၏ Tasks များ၊ Schedule များကိုအလျင်မြန်ဆုံးသိရှိနိုင်ရန်အတွက် MS CRM system ကိုအသုံးပြရန်တိုက်တွန်းပါရစေ ခင်ဗျာ။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Service Operation ကို Smart Operation အဖြစ်မြှင့်တင်ပြီး Customer loyalty တည်ဆောက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး Service ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ Hirokei Myanmar မှ MS CRM System နှင့်အတူ Support ပေးဖို့အသင့်စောင့်ကြိုနေပါတယ် ခင်ဗျာ။
Maintenance Service CRM System ကို After Sales Service Company တွေရဲ့ Operation ထဲမှာ ဘယ်လို Team မျိုးတွေသုံးသင့်လည်း ဆိုတော့...
Customer Service Team မှာဆိုရင် Engineer တစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ Customers Site များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသောအခါ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်တွေ ၊ တစ်နေ့တာ အတွက် သွားထားခဲ့သော Customers Site များ ၊ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ ရသော Problem များစွာကို Management Team အား မိမိတို့၏ ပြုလုပ်ခဲ့သော Tasks များကိုတင်ပြနိုင်မှ ဖြစ်တဲ့အတွက် Engineer များ၏ Performance များကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sales and Marketing Team အနေဖြင့်လည်း Enquiry Customers များ၊ Marketing လိုက်ထားသော Customer များ၏ Data အချက်အလက်များကို System ထဲတွင် ရေးမှတ်ထားနိုင်သောကြောင့် သိရှိလိုသောအချိန်တိုင်းတွင် အလွယ်တကူရှာဖွေးနိုင်ပြီး Customer များ၏ Follow Up အခြေအနေများ အလိုက် Opportunities ဖွင့်ထားနိုင်ခြင်း၊ Potential Customers များကို Sale Win ဖြစ်တဲ့ အထိ System ထဲတွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြိုးစားနိုင်သောကြောင့် ချမှတ်ထားသော Sales Target များကို သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း ပြည့်မှီအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Management Team အနေဖြင့်လည်း System အားအသုံးပြုခိုင်းထားသော Department အလိုက် နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်နေရသော Task များအား Daily Report ထုတ်ယူနိုင်ပြီး Operation တွင်လိုအပ်နေသော အပိုင်းများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော အကြံဉာဏ် များပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Management Team က တာဝန်ပေးစေချင်သော အလုပ်များကို Department အလိုက် ဝန်ထမ်းများအား Calendar Function တွင် နေ့ရက်များနှင့်တကွ Assign ချပေးနိုင်သောကြောင့် တာဝန်များခွဲဝေပေးပြီး လုပ်ဆောင်စေနိုင်ခြင်း၊ System ထဲတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော Department များအလိုက် History Record များကျန်ရှိနေသောကြောင့် သိရှိလိုသောအကြောင်းအရာများကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပြီး Cloud Base System ဖြစ်သည့်အတွက် မည်သည့်နေရာ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို Internet ရှိရုံဖြင့် Company ၏ Operation တစ်ခုလုံးကို Manage ပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။